6 erayo amaan ah oo raggu jecelyihiin in ay dumarka ka maqlaan | Raganimo University
6 erayo amaan ah oo raggu jecelyihiin in ay dumarka ka maqlaan
June 1, 20195 minutes
Horey waxaan wax uga qornay erayo macaan oo dumarka jecelyihiin in raggu ay ku yiraahdaan. Balse ragga laftoodu waa jecelyihiin amaanta iyo erayada niyada u dhisa. Waliba waxaa la dhihi karaa raggu dumarka waa ka jecelyihiin amaanta. Qaasatan marka ay amaantu ka imaanayso qof uu ninku jecelyahay waxay noqonaysaa mid qiimo weyn ugu fadhida.
Hadaba dumaroow haddii aad dooneyso in aad kasbato ragga raac talooyinkaan
1. U sheeg in aad kalsooni ku qabto
Haddii aad seygaaga ama wiilka aad jeceshahay aad u sheegto in aad kalsooni ku qabto waxaa hubaal ah in uu la dhici doono erayadaas. Raggu aad ayay u qiimeeyaan in ogaadaan in qof uu kalsooni ku qabo. Tusaale erayada amaanta ah ee la xiriira kalsoonida waxaa ka mid ah:
"Kalsooni ayaan kugu qabaa.",
"Waan ku aaminsanahay.",
"karti ayaad leedahay.",
"Waan jeclahay kartidaada,"
"Waan hubaa in aad waxkasta oo aad samayso aad guul ka gaarayso." iwm.
Erayadaas iyo kuwa la mid ah raggu waa jecelyihiin.
2. Amaanta la xiriirta jirka iyo muuqaalka ninka
Ragg badan ayaan ku kalsooneyn muuqaalkooda iyo jirkooda. Ragga keliya ma ahan ee dadka oo dhan ayaa jecel amaanta muuqaalka la xiriirta, oo doonaya gacalisadiisu in ay u sheegto in ay ku qanacsantahay muuqaalkiisa. Amaanta muuqaalku waa in ay noqoto mid qaas ah sida in aad jeceshahay gacmahiisa, timahiisa, indhahiisa, iyo xitaa xubnaha qaaska ah sida guska haddii aad lamaane tihiin. Eray bixinta aad isticmaali karto waxaa ka mid ah:
"Waa quruxbadantahay ama Waa nuuraysaa.", "Murqo ayaa leedahay ama jirkaagu waa dhisanyahay."
"Labiskaas waa ku qurxoontahay." "Waan jeclahay dhoolo-cadeyntaada, ama qosolkaaga." iwm.
3. Amaanta la xiriirta waxyaabaha uu kuu qabto
Dadka oo dhan waa jecelyihiin in lagu aqoonsado wax qabadkooda. U sheeg ninkaaga in aad ku qanacsantahay waxqabadkiisa xitaa waxyaabaha yaryar. Marka uu ogyahay ninku in aad jeceshahay waxyaabaha uu kuu qabto, waxay u badantahay in uu waxqabadkiisa sii kordhin doono. Eray bixinta aad isticmaali karto waxaa ka mid ah:
"Waan jeclahay sidaa ii daryeesho."
"Cuntadaan aad ayay u macaantahay." haddii uu cunto kuu kariyo.
"Waan ka helaa sidaa ii dhagaysato."
Amaantaadu ha noqoto mid qaas u ah hawsha uu qabtay.
4. Amaanta muujinaysa in aad xushmad u hayso
Cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in raggu ay xushmada u arkaan qeyb ka mid ah jaceylka. Waxaa la ogaaday in raggu ay xaaskooda in ay xushmayso ay ka doorbidaan in ay jeceshahay. Inkastoo dadku ay kala duwanyihiin, hadana waxaa hubaal ah in raggu dhamaantood ay qiimeeyaan xushmada. Tusaale eray bixinta la xiriirta amaanta xushmada waxaa ka mid ah.
"Waxaa tahay qof wanaagsan.", "Waan kugu faanaa."
"Waxaan kuu hayaa xushmad weyn."
"Waxaad tahay qof markasta noloshiisa hormariya."
"Waxaa tahay qof karti leh.", "Waxaad tahay qof daryeel badan."
5. Amaanta muujinaysa in aad aaminsantahay
Raggu waxay jecelyihiin in ay hogaamiye noqdaan, qaasatan marka ay la xiriirto jaceylka, guurka iyo qoyska. U muuji seygaaga in aad aaminsantahay oo aad ku kalsoontahay hogaankiisa. Eray bixinta aad isticmaali karto waxaa ka mid ah:
"Waa ku aaminsanahay.", "Taladaada qiimo ayay leedahay."
"Hadalkaagu muhiimad ayuu ii leeyahay."
"Garabkaaga ayaan markasta taaganahay."
"Waxaa tahay qof caqli badan ama karti badan."
6. Amaanta muujinaysa in aad dareen u qabto
Raggu aad iyo aad ayay ugu riyaaqaan in ay ogaadaan in gabadh ay dareen ku abuureen. Haddii aad dareen u qabto wiil u sheeg dareenkaaga iyo saameynta uu kugu yeeshay. Waliba u sheeg waxyaabaha isaga qaaska u ah ee dareenka kugu dhaliyay. Waxaa hubaal ah in aad isku soo dhawaan doontaan. Eray bixinta aad isticmaali karto waxaa ka mid ah.
"Dareen ayaad igu dhalisay."
"Waxaan la dhacay aragtidaada, qosolkaaga, iwm".
"Markaan ku arko ama kula joogo farxad ayaan dareemaa."